Suldaan C/kariin Maxamed: “Booqashadii madaxweynaha waxey noo aheyd dhiiri gelin” – Radio Muqdisho
Salaadiinta iyo odayaasha ku dhaqan gobollada dhexe ayaa soo dhaweeyay booqashadii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda ku tagay Dhuusamareeb iyo is afgaradkii laga gaaray wadahadalladii uu madaxweynuhu la yeeshay odayaasha.
Suldaan C/kariin Maxamed Maxamuud ayaa Radio Muqdisho u sheegay ineey aad iyo aad ugu farxeen booqashada madaxweynaha iyo is afgaradka laga gaaray wadahadalladii uu madaxweynuhu la qaatay samadoonnada.
“Nasiibbaan u yeelanay in madaxweynuhu na soo booqdo uu nala joogo aad iyo aadbaana loo soo dhaweeyay waana ku faraxsanahay, wuxuuna beelaha iyo ergooyinka kala hadlay dhismaha maamulka labada gobol Galgaduud iyo Mudug” ayuu yiri Suldaan C/kariin Maxamed Maxamuud.
Suldaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in booqashada madaxweynuhu ay u tahay dhiirigelin islamarkaana si wanaagsan la isugu afgartay wadahadalladii uu madaxweynuhu la qaatay beelaha iyo ergooyinka.
Wuxuu hoosta ka xariiqay Suldaan C/kariin in shirka maamul u sameynta gobollada dhexe uu qabsoomi doono islamarkaana uu hergeli doono maamul goboleed ay yeeshaan labadaasi gobol, kaasoo leh karti iyo awood waxqabad.
Roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka Mudug oo ay ka jirtay abaar iyo biyo la'aan